Philips dia manomana ny jirony mifanaraka aminy ho amin'ny telovolana farany amin'ity taona ity | Avy amin'ny mac aho
Mazava ho azy, raha misy teknolojia andrasan'ny mpampiasa maro ary mifandraika amin'ny automatisation an-trano dia ny fampidirana ao amin'ny Zava-bikan'ny mpamokatra. Amin'ity tranga ity ny sonia fanta-daza Vonona ho vonona i Philips handefa ny katalaogin'ireo jiro mifanaraka amin'ny Matter mandritra ity telovolana farany tamin'ny 2021 ity.
Ny fampidirana an'i Matter dia iray amin'ireo tsy nampoizina tao amin'ny keynote an'i Apple ary natao ofisialy ihany tamin'ny farany. Ankehitriny dia tsy maintsy manantena isika fa tsy maharitra ela ny fampidirana ity protokol ity amin'ny fitaovana marani-tsaina toa ny ohatra ny jiro Philips na mpandahateny Sonos ankoatry ny vokatra maro hafa. Ity fampidirana ity dia hahafahan'ny mpampiasa mifehy ny trano an-trano HomeKit avy amin'ny mpandahateny rehetra noho ny fanamoriana ny protokol amin'ny Matter.
Amin'ity tranga ity Ny takamoa Philips Hue dia afaka mampiseho an'ity fampitahana Matter ity amin'ny volana septambra ho avy izao. Mazava ho azy, teboka iray ny fiheverana fotsiny rehefa hividy ny fitaovantsika haitao ho an'ny trano, asa na birao isika. Ary miankina amin'ny vokatra avelantsika dia miankina amin'ny hubs na tetezana ivelany hampiasana azy isika, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny Matter dia tsy ilaina intsony izany.
Ny fananana tombo-kase izay manome antoka fa mifanentana amin'ny fenitra fifandraisana vaovao ho an'ny vokatra an-trano Matter dia tsy misy isalasalana fa ny zavatra tsara indrindra azonao ampidirina amin'ny takamoa maranitra izay efa tsara amin'ny famirapiratana, ny kalitao ary ny fahamendrehana. Ho hitantsika raha efa nampiditra an'io ilay jiro voalohany amin'ny jirama maranitra, izay azo antoka fa izany no izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Philips dia manomana ny jirony mifanaraka aminy ho an'ny telovolana farany amin'ity taona ity
Podcast 12x37: Fried HomePods sy olana amin'ny tsiambaratelo manome olana